Ama-Real Estate Agencies - Ukuboniswa okulula okulula - izimpawu zedijithali
I-Easy Multi Display nayo isetshenziswa yi-ejensi yezezindlu!
"Ngenxa ye-Easy Multi Display, amakhasimende ethu angabona ukunikezwa kwethu okukhanga kakhulu!"
Le ejensi yezezindlu itholakala eLyon, eFrance. Wayefuna inkampani enhle ukuthi ifake uhlelo olusha lwezimpawu zedijithali ebhizinisini lakhe ngakho-ke wabuza umhlanganisi wendawo owakhetha i-Easy Multi Display.
Kungani akhethe i-Easy Multi Display?
I-ejensi yezezindlu isivele isebenzisa i-Easy Multi Display izinyanga ezimbalwa futhi yanelisekile kakhulu! Ngempela, ithimba lethu lobuchwepheshe lingeze inketho yokwengeza ama-URL kusuka kufayela lombhalo elicelwe yi-ejensi yezezakhiwo!
Lokhu okungeziwe kuvumela ukufaka izixhumanisi ngqo nencwajana yokubhalela, ngakho-ke i-ejensi yezezindlu ayisadingi ukuvula i-Easy Multi Display ukushintsha isibonisi sayo. I-agence ye-real estate idinga nje ukuvula ifayela labo lombhalo futhi iguqule izixhumanisi ezingaphakathi ukushintsha isibonisi sabo!
Ukubandakanyeka kwethu ekwanelisekeni kwamakhasimende ethu kuhehe umphathi wale nkampani yezindlu ezithengiswayo. Namuhla, i-ejensi isebenzisa i-Easy Multi Display ukubonisa izakhiwo zabo ewindini labo.
Kuyini ukumiswa kwakhe?
Ukucushwa kwayo kunesikrini esisodwa esibekwe efasiteleni laso ukuze kuhehe iso labadlula ngendlela yezimpahla ezithengiswa yi-ejensi yezindlu.
Ngakho-ke kulo mbukiso uthenge isikrini nekhompyutha encane, ikhebula le-HDMI kanye nenguqulo "yesikrini esisodwa" se-Easy Multi Display. Izindleko eziphelele zesisombululo sazo cishe zingama-500 €
KUNGANI USUSE KUSETJENZISE KULULA KAKHULU?
3 izinhlobo ukwanelisa lonke uhlobo lwebhizinisi
Akunandaba noma ngabe uyinkampani ene-1 monitor noma i-6 monitors, i-Easy Multi Display ivumelanisa nakho konke ukucushwa!
Shintsha isibonisi sakho kusuka efonini yakho!
I-Easy Multi Display isekela i-Google Slides futhi ikuvumele ukuthi ushintshe isibonisi sakho ngqo kusuka ku-Google Slides efonini yakho!
Isoftware evuselelwa njalo
Nsuku zonke, ithimba lethu lisebenza kusoftware ukukunikeza izimpawu ezinhle kakhulu zedijithali, awusekho wedwa ngoba silapha ukuzokusiza nokukululeka ngokusebenzisa i-Easy Multi Display.
LOKHO OKUSHIWO BASEBENZI
Irimothi yiyona enqume ukuthi sisayine. Iguqula udonga lwevidiyo lube yisikhungo somyalo esiguquguqukayo
Umphathi we-IT SDIS
I-EMD ukuphela kwethuluzi le-W10 lokuhlukanisa kahle isikrini sami
Izindleko eziphelele zesisombululo azinakuqhathaniswa nokunikezwa ngokwesiko.
Umphathi Wezezimali i-SDIS
I-TOTAL SOLUTION COST
Siyibiza kulula ukubonisa okuningi ngoba ukuvuka nokugijima nge
Isixazululo sezimpawu zedijithali nathi kulula.
Okudingayo ukuze uqalise ...
Ikhompyutha enekhadi lehluzo - elikwazi ukusebenzisa ukubonisa okuningi.
Njengama-TV amaningi njengoba udinga kulungiselelo lwakho lokubonisa oludingekayo.
Isoftware Ekhombisa Ngobuningi
Azikho izindleko ezifihliwe.
Akunazindleko zanyanga zonke.
Ayikho i-Hardware eyinkimbinkimbi.
Ilayisense elilodwa elilodwa elingenazo ama-addons noma ukuthuthukiswa.
ngaphandle. I-VAT *
1 Ilayisense YeSoftware
Ukuboniswa esikrinini esingu-1 kuze kufike ezindaweni ezi-4 zemidiya ezihlukile
Ukuvuselelwa kwesoftware yefu izinyanga eziyi-12
Ukufinyelela Inethiwekhi Yasendaweni
Ukuqeqeshwa Okuku-inthanethi Ngokusekelwa
Ukufakwa Kwamasoftware Kwenziwe Ngokwezifiso
Inketho yethu ethandwa kakhulu.
Kuboniswa ezikrinini ezi-6 kufika kwizindawo zemidiya ezihlukile ezingama-24
Ukufinyelela kwenethiwekhi yasendaweni (kudinga amalayisense ama-2: i-PC Server ne-PC Player)
Ukufakwa Onsite & Support
Isoftware yethu ephelele nezinsizakalo zethu.
Kusukela € 899 i-VAT *
Amanye amasevisi atholakala kumakhasimende ethu webhizinisi:
Ukufinyelela kusekelo lobuchwepheshe elikude
Xhumana nathi namuhla ukudingida izidingo zakho.
Kulula ukusebenzisa i-Interface
Amakhasimende ethu athanda ukuthi kulula kangakanani ukukhombisa imidiya yawo nge-Easy Multi Display. Isixhumi esibonakalayo sesoftware sikuqondisa kwinqubo yokumisa inqubo ngesinyathelo ngesinyathelo, ukukubuza yonke imibuzo efanelekile lapho usendleleni.
Awudingi ukuba yi-tech guru ukuze uvuke usebenzise i-Easy Multi Display.
Wakhelwe isibonisi esibonisa
- I-Easy Multi Display wizard ikuqondisa ngenqubo yokusetha.
Gcina ukucushwa okuningi
- Gcina ukucushwa kokuboniswa okuningi bese ukulayisha kalula.
- Ukukhethwa kolimi: English, French, Chinese, Spanish, Deutch kuyaqhubeka ...
Ngabe udinga usizo olungeziwe? Sinikeza ukuqeqeshwa online noma esizeni kanye nokuxhaswa software, sicela uxhumane nathi!
LAPHA ISIVIVINYO SAMAHHALA SOKUGCWALULA KAKHULU
Thola ukufinyelela khona manjalo
BONAKALA IZIBONELELO ZETHU NEZikhungo ZOKUQEQESHA
Ufuna ukubona i-Easy Multi Display isebenza? Xhumana nathi ukuhlela isibonakaliso samahhala, noma uthole ukuqeqeshwa eqenjini lethu lobuchwepheshe.
Iya ekhasini lethu lama-showrooms >
Ufuna ukunikezwa okukhethekile nezaphulelo?
Bhalisela incwadi yethu yezindaba bese ugcine.
Sizokuthumela ngezikhathi ezithile zezindaba namakhodi wesaphulelo. Asisoze sagaxeka, siqasha noma sithengisa imininingwane yakho.
Thinta bese ucela isilinganiso ...
Bhuka idemo yokubukisa namuhla.
Bona ukuthi yini i-Easy Multi Display engenza...
Gcwalisa ifomu elingezansi bese elinye iqembu lethu lizothintana kungekudala ukuhlela isikhathi sokuqokwa.
Bhuka isikhathi sokuqeqeshwa namuhla.
Thola okuningi nge-Easy Multi Display ...
Gcwalisa ifomu elingezansi futhi elinye neqembu lethu liyoxhumana ukuze lixoxe ngezidingo zakho zokuqeqeshwa.